Myanmar Java User: Java ကို စတင်လေ့လာမည်ဆိုလျှင်
Programming ဘာသာ​ရပ်​တစ်​ခုခု​ကို စတင်​လေ့​လာ​မည်​ဆို​လျှင်​တွေ့​ရှိ​ရ​မည့် အခက်​အခဲ​များ များ​စွာ​ ရှိ​ကြ​ပါ​သည်။ ဘယ်​လို​စာအုပ်​တွေ​ကို​ ဝယ်​ရ​မ​လဲ၊ ဘာ​တွေ​ဘယ်​လို​ပြင်ဆင်​ရ​မ​လဲ၊ ဘာ​တွေ​လုပ်​လို့​ရ​လဲ အစ​ရှိ​တဲ့ အကြောင်းအရာ​တွေ​ဟာ လေ့​လာ​သူ​တွေ​ကို လွန်စွာ​မှ​ခေါင်း​ရှုပ်​စေသော အချက်​များ​ ဖြစ်​ကြ​ပေ​သည်။ တစ်​ခါ​တစ်​လေ　စာအုပ်​တွေ​ဝယ်​ပြီး　ဆက်​ပြီး မလုပ်ဖြစ်​တာ တွေ​လည်း　များ​လိမ့်​မည်​ဟု ထင်​ပါ​သည်။
တစ်​ချို့​သော​စာအုပ်​များ​ဆို​လျှင် လွန်စွာ​မှ​ပြည့်ပြည့်​စုံစုံ ​ရေးသား​ထား​ကြ​သည်။ သို့​ပေ​မယ့် လေ့​လာ​စ​သူ​ဆို​လျှင် ဖတ်​ရင်း​နဲ့ ခေါင်း​ရှုပ်​ပြီး လိုရင်း​ကို​မ​ရောက်​ပဲ လမ်း​တစ်ဝက်​တွင် လမ်း​ပျောက်​သွား​တတ်​ကြ​၏။ လွယ်ကူ​စွာ​ရေးသား​ထား​သော စာအုပ်​များ​ဆို​ပြန်​လျှင်​လည်း အချက်အလက်​များ​က မ​ပြည့်​စုံ​တက်​ပေ။ စာ​ဖတ်​သူ​က ဘယ်​လို​စာအုပ်​မျိုး​ကို ရွေးချယ်​သင့်​တယ် လို့​ရွေးချယ်​ရ​သည်မှာ လွယ်​မ​ယောင်ယောင်​နဲ့ လွန်စွာ​မှ​ခက်ခဲ​လှ​ပေ​သည်။
ထို့​အပြင်Java ကို​လေ့​လာ​ရာ​၌ ပိုမို​၍​ခက်ခဲ​စေ​သည့် အချက်​များ​တွင် အောက်​ပါ​အချက်​များ​လည်း​ပါဝင် ကြ​ပေ​သည်။
Java Programming Language သည် Object Oriented အတွေး​အမြင်​များ​နှင့် လွန်စွာ​ဆက်​စပ်​နေ​ပါ​သည်။ အဲ့​ဒီ​အတွက် ကြက်မ​ကြီး​နဲ့​ကြက်ဥ၊ ဘယ်​ဟာ​က အရင်​မွေး​တာ​လည်း ဆို​တဲ့​မေးခွန်း​လို၊ Java Languageကို အရင်​လေ့​လာ​ရ​မ​လား၊ ဒါ​မှ​မဟုတ် Object Oriented အတွေး​အခေါ်​တွေ​ကို အရင်​နားလည်​အောင် လေ့​လာ​သင့်​သလား ဆို​တဲ့​မေးခွန်း​မျိုး​သည်​လည်း လွန်စွာ​မှ​ဖြေ​ရ​ခက်ခဲ​လှ​ပါ​သည်။ အချို့​သော ဆရာ​ကြီး​များ​က C ကို​အရင်​လေ့​လာခြင်းသည် အကောင်း​ဆုံး​ဖြစ်သည်ဟု ပြော​လေ့ရှိကြ​ပါ​သည်။
ကျွှန်တော်​တော့​အဲ့​ဒီ​လို မ​ထင်​ပါ။ ဘာ​လို့​လဲဆို​တော့ C Programming Expert တိုင်း​သည်၊ လှပ​သော Java Codeတွေ​ကို အမြဲ​တမ်း​ရေး​နိုင်​ကြ​လိမ့်​မည်​ဟု အာမခံ​ချက်မ​ရှိ​သော​ကြောင့် ဖြစ်​ပါ​သည်။ နောက်ဆုံး C ရဲ့​အတွေး​အခေါ်​တွေ​က ခေါင်း​ထဲ​မှာ​ပြည့်​နေ​ပြီး တော်​ရုံး​နဲ့ Java ကို လက်မ​ခံ​နိုင်​ကြ​သည်​က ​များ​မည်​ဟု​ထင်​ပါ​သည်။ အဲ့​ဒီ​အတွက် Java ကို​စ​လေ့​လာ​ရန်​အတွက် လက်​ရှိ​ Java ကြောင်း​ကို​ဘယ်လောက်​သိ​ပြီး​ပြီ​လဲ ဆို​တာ​ကို​သိရှိပြီး ဘယ်လောက်​သိ​ပြီး ဘာ​ကို​ဆက်​လေ့​လာ​ရ​မည် ဆို​သည်​ကို​သိ​ထား​ခြင်း​သည် လေ့​လာ​သူ​တစ်​ယောက်​အနေ​နဲ့ လွန်စွာ​မှ အထောက်​အကူ​ပြု ပေ​လိမ့်​မည်။
ဤ java ကို အမြန်​ဆုံး​လေ့​လာ​နည်း​တွင် Java ကို​လုံး​ဝ​မ​သိရှိ​သူ​က​အစ၊ အနည်းအကျဉ်း​လေ့​လာ​မိ​ပေ​မယ့် Java Programmer လား​လို့​မေး​သော​အခါ ဖြေ​ရ​ခက်ခဲ​နေ​သော​သူ​များ​ကို ရည်​ရွယ်​ပြီး၊ Basic, Intermediate, Advance ဆို​ပြီ​အဆင့်​၃​ဆင့်​ခွဲ​ခြား​ပြီး ရေးသား​သွား​မည်​ဖြစ်​သည်။ အဲ့​ဒီ​အတွက် ကိုယ်​ကလက်​ရှိ​ဘယ်​ကို ရောက်​နေ​ပြီး ဘာ​ကို​ဖတ်​ရှု​သင့်​သည်​ဆို​သည်​ကို သိရှိ​စေ​ရန် Road Map တစ်​ခု​ကို ပြင်ဆင်​ထား​ပါ​သည်။
အဲ့​ဒီ​မေးခွန်း​လေး​များ​ကို ဖြေ​ကြည့်​ပြီး နောက်​အခန်း​ဆက်​များ​ကို ဆက်လက်​ဖက်​ရှု​သွား​စေ​လို​ပါ​သည်။
Entrance နဲ့ Basic ကတော့ Java SE Categories တွေကို ဖတ်သွားသင့် ပါတယ်။ Intermediate အထက်ကတော့ Servlet, JSP, Design Patterns နဲ့ Java EE တို့ကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။
Anonymous 10/31/12, 1:21 PM
THOO DOE 7/28/14, 6:49 AM
Where can I get Basic 1 &2?
Do you mean Basic Database/Programming?
zaw min Lwin 8/1/14, 11:11 PM
Basic 1 means Java Language Specifications.
Basic2means Object Oriented Concepts of Java Programming.
Anonymous 8/4/14, 5:15 PM
Zaw Lin Aung 12/3/15, 6:07 PM
Roadmap photo save မရလို႔
မျိုးမင်း ကျော် 8/25/17, 3:37 AM
Road map not available.